Ireto ny sasany amin'ireo vaovao hitantsika amin'ny CES manaraka | Vaovao momba ny gadget
Ireto ny sasany amin'ireo vaovao hitantsika amin'ny CES manaraka
El Show Electronics Consumer Na inona no itovizany, CES dia iray amin'ireo hetsika ara-teknolojika lehibe natao manerantany, miaraka amin'ny kongresin'ny World Mobile, ary efa hita izany hatramin'ny hanombohany ny 4 Janoary. Herintaona indray no ankalazaina ao amin'ny tanànan'ny Amerikana Las Vegas izay hifindran'ireo orinasa manan-danja indrindra amin'ny tsenan'ny finday.
Efa maro ny vaovao miseho momba ny CES 2017 ho avy ary mba tsy ho diso anjara ianareo dia nanapa-kevitra ny hamorona ity lahatsoratra ity izahay, hampiseho ny sasany amin'ireo vaovao hitantsika amin'ny CES manaraka isika. Ho fanampin'izany, mba tsy halainao amin'ny antsipirihany tanteraka ny zava-misy dia havaozinay amin'ny alàlan'ny zava-baovao lehibe rehetra mitranga ity lahatsoratra ity.
1 Inona ny fampisehoana elektronika ho an'ny mpanjifa?
2 BlackBerry sy ny BlackBerry Mercury vaovao
3 ASUS hampahafantatra ny ZenFone vaovao
4 Samsung; Tena ho hitantsika ve ny finday avo lenta voalohany?
5 Ho eo i LG fa tsy hisy vaovao be
6 HTC sy ny fanoloran-tenany amin'ny zava-misy virtoaly
Inona ny fampisehoana elektronika ho an'ny mpanjifa?
Alohan'ny hanombohanao mahita ny vaovao azontsika jerena amin'ny CES manaraka, tsy maintsy fantarintsika izay lazaintsika ary raha misy zavatra tsy ampy anao, tokony ho fantatrao fa ity hetsika ity dia iray amin'ireo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, mifandraika amin'izao tontolo izao ny teknolojia. Nankalazaina tao an-tanànan'i Las Vegas izy nandritra ny 40 taona.
Ny Consumer Electronics Show dia miaraka manampahaizana, mpanao gazety ary koa liana amin'ny fahalianana sy liana amin'ny haitao izay afaka mankafy amin'ny fotoana rehetra. Fampiratiana 200.000 3.600 metatra toradroa, izay misy fampiratiana mihoatra ny 140 avy amin'ny firenena XNUMX. Ho fanampin'izay, ny hetsika dia mandray fihaonambe sy famelabelarana isan-karazany amin'ny fitaovana maro karazana.
BlackBerry sy ny BlackBerry Mercury vaovao
Omaly dia fantatray tamin'ny fomba ofisialy fa hanolotra fitaovana finday vaovao ao amin'ny CES i BlackBerry. Ity terminal ity, vita batemy amin'ny anaran'i BlackBerry MercuryIzy io no voalohany novokarin'ny TCL ary hitazona ny votoatin'ny fahombiazana lehibe an'ny orinasa kanadiana.
Araka ny hitanao amin'ny sary izay efa tafaporitsaka avy amin'ny finday avo lenta, dia hanana kitendry ara-batana ary koa misy andinindininy izay hitondra ity fitaovana ity hanakaiky kokoa ny faran'ny tsena. Mbola mila mahafantatra antsipiriany maro isika, ankoatry ny vidiny, izay mety ho fanalahidy hahafantarana raha hahatratra ny toerana manan-danja eo amin'ny tsenan'ny finday mifaninana ity BlackBerry Mercury ity.
ASUS hampahafantatra ny ZenFone vaovao
ASUS dia orinasa iray hafa izay efa nanamarina tamin'ny fomba ofisialy daty hanaovana ny hetsika kintana. Hatao amin'ny 4 Janoary amin'ny 11:30 maraina izao ary araka ny tsaho maro dia afaka manatrika ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny ZenFone vaovao isika. Raha sendra manana fanontaniana ianao, amin'ny fanasana voarainay hanatrika ilay hetsika dia ho hitanao fa natao batemy tamin'ny anaran'i ZennovationMisy manana fisalasalana ve?
Ao amin'ny fanasana sy ny marina amin'ny anaran'ny hetsika dia afaka mahita anarana hafa manambara toa an'i Qualcomm Snapdragon isika, izay mitarika antsika hieritreritra fa ny ZenFone vaovao dia hametraka mpikirakira ity orinasa ity, angamba ny 835, na dia hanamafisana azy aza isika dia hanao mila miandry ny 4 janoary ho avy izao.
Samsung; Tena ho hitantsika ve ny finday avo lenta voalohany?
Tsaho marobe no miresaka Samsung dia afaka nanolotra smartphone amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny CES 2017, saingy vitsy ny tsy mino an'izany. Ary izany dia arak'ireo tsaho ireo fa ny orinasa Koreana Tatsimo dia hanana fitaovana finday miendrika boky vonona handefa eny an-tsena, izay azo sokafana hahazoana efijery lehibe.
Amin'izao fotoana izao dia vitsy ny famantarana momba an'ity terminal ity, na dia toa mahaliana indrindra aza, amin'ny tsy fahalalana raha ho maodely hahatratra ny tsena amin'ny fomba mahazatra izy io na ho prototype noho ny Samsung. Ny fisalasalana rehetra izay azo antoka fa mandalo ny lohanao toa ahy dia afaka mamaha azy ireo tsy ho ela isika ary izany dia eo akaikin'ny akaiky indrindra ny Consumer Electronics Show.
Miaraka amin'ny finday avo lenta vaovao, Samsung dia mety hanana fitaovana maro hafa, ao anatin'izany ny maodely amin'ny fahitalavitra, ny milina fanasan-damba ary koa ny takelaka na fitaovana finday.
Ho eo i LG fa tsy hisy vaovao be
LG dia iray amin'ireo orinasa manandanja indrindra eo amin'ny tsenan'ny teknolojia, na dia ohatra aza ny fahaverezan'ny fisiany eo amin'ny tsenan'ny telefaona finday, miaraka amin'ny revolisionera LG G5 very fanatrehana io. Amin'ity CES ity dia ho eo indray izy, na dia tsy misy vaovao kely aza haseho antsika, ary tsy misy amin'izy ireo misy ifandraisany na manan-danja.
Raha tsy mandeha ny kaonty, dia hahita vaovao manandanja sasany avy amin'ny orinasa Koreana Tatsimo ao amin'ny Mobile World Congress, izay misy ny tsaho milaza fa ny LG G6 ary na ny G Flex vaovao aza dia azo aseho amin'ny fomba ofisialy.
Tao anatin'ny ora vitsy lasa izay, ny orinasa Koreana Tatsimo dia nanome fampahalalana isan-karazany momba ireo fitaovana ho hitantsika amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny CES 2017. Any Las Vegas dia afaka mahita mpandahateny vaovao sy liana te hahafantatra sy manana fizakan-tena 24 ora isika. Etsy ambany no ahitanao ity mpandahateny hafahafa ity amin'ny sary ofisialy nomen'ny LG anay.
Ho fanampin'izany, toa azo antoka ihany koa fa afaka mahita ny fahitalavitra OLED vaovao sy fitaovana hafa misy fambara momba ny firaisana amin'ny biby isika. Araka ny tsaho sasany, LG dia afaka nanolotra tamin'ny fomba ofisialy a SUHD 8K TV tsy misy zavatra hafa ary tsy latsaky ny 98 santimetatra.
HTC sy ny fanoloran-tenany amin'ny zava-misy virtoaly
HTC mitohy mampihena ny lanjany rehefa mandeha ny fotoana, nefa na eo aza izany dia mitohy ho orinasa ekena tokoa izy, tsy ny mpampiasa ihany fa ny orinasa lehibe hafa ao amin'io sehatra io. Saingy, mandalo fotoan-tsarotra izy amin'izao fotoana izao, manidy birao manerana an'izao tontolo izao ary tsy misy vaovao lehibe hisehoany amin'ny Consumer Electronics Show.
Araka ny tsaho sasany hitanay kinova vaovao an'ny headset virtual reality HTC ViveNa dia mety aleon'izy ireo ihany koa aza ny miditra amin'ny tsena hafa toy ny smartwatches, izay efa niandrasan'izy ireo hatry ny ela ny smartwatch voalohany avy amin'ny orinasa monina any Taiwan.
Xiaomi dia ho eo amin'ny CES voalohany ary indrisy fa tsy hanao izany ny manome lakolosy na mampiseho fitaovana revolisionera ho antsika. Ilay mpanamboatra sinoa toa manararaotra ny hetsika amerikana asehoy a kinova vaovao amin'ny Mi Mix mahomby, fotsy, izany dia mety hanomboka hamidy ao Etazonia tsy ho ela.
Ho fanampin'izany, ho hitantsika ihany koa ny fampisehoana fanavaozana ny fakantsary Xiaomi Yi hetsika, izay manolotra antsika ny fahafaha-mirakitra feo amin'ny famahana ny 4K, ary ny drone izay hatao batemy amin'ny anaran'i YI Erida, koa afaka manoratra ao 4K ary mahatratra hafainganam-pandeha avo kokoa .. amin'ny 120 km / ora.
Tadidio fa hanavao ity lahatsoratra ity isika rehefa mandeha ny andro ary mampiditra ny vaovao rehetra izay mivoaka manodidina ny CES 2017 izay hanomboka afaka andro vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireto ny sasany amin'ireo vaovao hitantsika amin'ny CES manaraka
Gboard dia mihoatra ny 500 tapitrisa alaina ao amin'ny Google Play
Ny Samsung Galaxy S8 dia mety ho lasa solosaina noho ny fiasa mitovy amin'ny Continuum